CO₂ Laser maka Ejiji na Clothing Industry - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
CO₂ Laser maka Ejiji na Clothing Industry
CO₂ laser IHE Uwe
Golden laser chepụtara CO₂ laser igwe n'ihi na ọnwụ otu ply, straipu na plaid akwa, e biri ebi akwa na karịsịa maka omenala mere otu n'usoro suut.
High oru oma MTM (-mere na-ezu) na ọgụgụ isi laser ọnwụ usoro.
Mission: Oru oma / Ihe azọpụta / Labor azọpụta / Zero yiri nkata / Intelligent
Laser Cutting na-akanye na Clothing Industry
Na-eto eto na-ewu ewu nke textiles, ejiji na n'uwe ụlọ ọrụ na-emepe emepe n'ike n'ike. Na ọ na-aghọ ndị ọzọ kwesịrị ekwesị n'ihi na ulo oru na usoro dị ka ọnwụ na osise. Sịntetik nakwa dị ka eke ihe na-now na- ebipụ na kanyere na laser usoro . Site kpara akwa, ntupu akwa, na-agbanwe akwa, ikwa akwa na nonwovens na felts, fọrọ nke nta niile iche nke akwa nwere ike ịbụ laser esichara.
Traditional eduzikwa vs. laser Cutting
Na ot tailoring, ntuziaka ọnwụ bụ ihe kasị n'ọtụtụ ebe na, sochiri n'ibu ọnwụ. Ma ndị a nhazi ụzọ na-etinyere elu-olu ọnwụ ọrụ, na ịcha ziri ezi bụ ọ dịghị elu. Laser ọnwụ igwe adabara obere-olu, multi-dịgasị iche iche uwe tailoring, karịsịa n'ihi na ngwa ngwa ejiji na omenala uwe.
Traditional ntuziaka ọnwụ nwere a elu ina na ụkpụrụ cutter na burrs mgbe ịcha. Laser ọnwụ nwere a elu-anọgidesi na akpaka ihu akara.
Ke adianade do, anyị na-enye CAD imewe, Ụgbọala welara, akpaka grading, akpaka foto digitizer software na laser ọnwụ iji nweta akpaghị aka nhazi.
Ntak-ahọrọ laser maka omenala uwe?
Golden laser chepụtara laser ngwọta nke ahaziri customization ke mbiet na uwe ụlọ ọrụ.
Jiri ya tụnyere ihe na ngwá ọrụ ọnwụ, na laser ọnwụ nwere uru nke elu kpọmkwem, obere consumables, dị ọcha ịkpụ n'ọnụ, na akpaka akara n'ọnụ ya.
Automatic nesting, akpaka nri na-aga n'ihu laser ọnwụ, dakọtara na uka mmepụta na nlele, na-azọpụta n'ịrụsi ọrụ ike nke ntuziaka na-agbasa na ụkpụrụ Ndinam.
Jiri ọkachamara nesting software ntọt ihe itinye n'ọrụ site dịkarịa ala 7%. The efu anya n'etiti ihe nakawa etu esi nwere ike ịbụ co-onu ịkpụ.
Professional software ngwugwu, mfe imeta ụkpụrụ emebe, welara Ndinam, foto digitizer na grading. Ụkpụrụ data dị mfe jikwaa na PC.
Oghere (perforating), ibe, hollowing, osise, obtuse akụkụ ịcha, ultra-ogologo format nhazi, laser igwe nwere ike ijikwa ọ bụla nkọwa zuru okè.
Anyị na-agba mbọ na-enyere gị ịzụlite ma melite gị mmepụta mfe na mma na anyị iche iche laser usoro.
Anyị CO 2lasers dị mma maka ịcha na-akanye a dịgasị iche iche nke akwa na textiles.
Na ọlaedo laser si CO 2laser igwe maka ejiji na uwe ụlọ ọrụ, otu-ply akwa nwere ike laser bee ngwa ngwa na oru oma, nakwa dị ka a kanyere na perforated ikuku tụgharịa tụgharịa. Ya mere, i nweta ihe na-arụpụta ihe na laser kama na a mma.
-Uru nke Golden laser si CO 2 laser igwe, bụrụ onye ndú gị ahịa.
CO 2flatbed laser ọnwụ igwe na ebu
Galvo laser mpịakọta tụgharịa ọnwụ na osise igwe
CO 2 laser cutter maka plaids na ibe ákwà
Vision laser cutter maka ndị e biri ebi na-akpa ákwà
Laser anwụ ọnwụ igwe reflective ihennyapade
Olee ụdị ákwà adabara CO2 laser nhazi?
Polyester, Aramid, Kevlar, ajị anụ, Cotton, polypropylene, Polyurethane, faiba glaasi, Spacer akwa, Nnọọ, Silk, Iyo ajị anụ, teknuzu textiles, sịntetik textiles, ụfụfụ, ajị anụ, Velcro ihe onwunwe, kpara akwa, ntupu akwa, Plush, Polyamide, etc .
Anyị nwere ike ikwu na ndị na-esonụ laser igwe
maka ejiji na uwe ụlọ ọrụ
Golden laser si CO2 laser igwe dị mma nke na-agbawa na osise textiles na nkenke na mgbanwe na mmepụta.
High ọsọ laser ọnwụ uwe ákwà na ebu na akpaaka-feeder. Ugboro abụọ Y-axis Ọdịdị. 80 watts ~ 150 watts
Galvo Laser Ịcha na Perforating Machine
A vasatail laser igwe na nwere ike ime ma ọnwụ na perforating maka eri, polyester, microfiber, ọbụna gbatia ákwà.
Laser cutter na Camera
Na-aga n'ihu nri, na akpaaka-ude na laser ịcha biri ebi akwa na n'uwe kpọọ. Iṅomi ebe 1500mm × 900mm